Jodita 10 - Ny Baiboly
Jodita toko 10
Jodita nanatona an'i Holoferina.
1Nony tapitra ny fivavahan'i Jodita tamin'ny Tompo, nitsangana avy teo amin'ilay fitoerany niankohofany tamin'ny tany teo anatrehan'ny Tompo izy. 2Niantso ny ankizivaviny izy, ka nidina tao an-tranony, dia nalany ny akanjony malailay, nesoriny ny fitafiam-pitondratena teny aminy. 3Nandro izy, dia nihosotra ny mira manitra indrindra, nanao volo, nanodidina ny lamba fehiloha tamin'ny lohany; niakanjo ny akanjo fitondrany amin'ny fety, namehy kapa tamin'ny tongony, nitondra ny fehin-tànany, ny fehivozony, ny kaviny, ary ny perany, dia niraratra tamin'ny fihaingoana rehetra. 4Notovonan'ny Tompo aza ny famirapirany, satria tsy mba hafalian'ny nofo fa ny hatsaram-panahy no fototry ny nanaovany an'izany haingo rehetra izany; ka noho izany nampitomboin'ny Tompo fatratra ny hatsaran-tarehiny ka tonga namirapiratra teo imason'ny olona rehetra, tamin'ny hakantoana tsy azo tahafina. 5Rahefa izany, ny ankizivaviny nasainy nitondra divay iray siny hoditra, diloilo iray tavoara, lafarina voaendy, voankazo maina ary mofo sy fromazy, dia niainga izy.
6Nony mby teo am-bavahadin'ny tanàna, izy sy ny ankizivaviny, dia indreo eo Oziasa mbamin'ny loholona, niandry azy. 7Nony nahita azy izy, dia variana nitampim-bava noho ny hatsaran-tarehiny. 8Tsy nanontany na inona na inona azy anefa izy ireo, fa namela azy handeha, nanao hoe: Andriamanitry ny razantsika anie hanome fahasoavana anao; hohamafisiny amin'ny fahefany anie ny hevitra voakasa rehetra izay ao am-ponao, ka hankalazaina noho ny aminao Jerosalema; ary hilahatra eo amin'ny an'ny olomasina sy marina ny anaranao. 9Dia indray namaly tamin'ny feo iray, izay rehetra teo, nanao hoe: Ho tanteraka anie izay! Ho tanteraka anie izany! 10Izay, vao nivoaka ny vahahady Jodita sy ny ankizivaviny sady nivavaka tamin'ny Tompo.
11Nony nidina ny tendrombohitra izy, tamin'ilay vaky masoandro iny, dia nifanehatra tamin'ny mandry tsy aman'afon'ny Asiriana, ka najanony nataony hoe: Avy aiza hianao, ary ho aiza? 12Hoy ny navaliny: Zanakavavin'ny Hebrio aho, ary nandositra avy any aminy satria fantatro fa hatolotra ho babonareo izy, noho izy naneso anareo sy tsy nety nitolo-tena an-tsitra-po taminareo, hahita fitia eo anatrehanareo. 13Ka noho izany hoy aho anakampoko: Ndeha ho any anatrehan'ny andriandahy Holoferina aho, hanambara aminy ny ankaromiafin'ireto, sy hanoro azy ny fidirana hahazoany azy rehetra, tsy hisy hahafatesan'ny miaramilany, na dia iray aza. 14Rahefa nandre ny teniny ireo olona ireo, dia nojereny ny tarehiny, ka variana teo ny masony, fa nahagaga azy loatra ity hatsaran-tarehiny tafahoatra. 15Namonjy ny ainao hianao, hoy izy ireo taminy, amin'izao nanapahanao hevitra hankaty amin'ny tomponay izao. 16Ary mahazo matoky hianao, fa horaisiny tsara rahefa miseho eo anatrehany, sady hahafinaritra ny fony indrindra hianao. Dia nentiny ho any an-dain'i Holoferina izy sy nambarany taminy.
17Vao tafiditra teo anatrehany izy, dia voa tamin'ny masony niaraka tamin'izay Holoferina. 18Hoy ireo manam-boninahiny taminy: Iza re no hahesoeso foana ny vahoaka Hebrio, izay tsara vehivavy toy itony? Tsy mendrika ho an'itony va ny hiadiantsika aminy, mba hananantsika an'itony? 19Hitan'i Jodita Holoferina nipetraka tao an-dainy, tenona jaky amam-bolamena, voaravaka emeraoda sy vato sarobidy. 20Nafantony tamin'ny endriny ny masony, dia nihohoka tamin'ny tany nitsaoka azy izy, nefa natsangan'ireo mpanompon'i Holoferina niaraka tamin'izay, araka ny didin'ity tompony, izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0721 seconds